Uphoxwe onogada usaziwayo obezama ukushutha uMinnie Dlamini | News24
Durban - Onogada abebengadle nkobe zamuntu, beqaphe isimo ngeso lokhozi baphoxe usaziwayo ongumsakazi weMetro FM, ophinde abe ngumculi nejaji kuma-Idols SA, u-Unathi Msengana, bamyalela ukuba angalokothi athathe izithombe emcimbini.
Lo saziwayo uziqhathe ngokuba aphakamise umakhalekhukhwini, ethi uzama ukuthwebula izithombe emcimbini womembeso womunye usaziwayo ongumethuli wezinhlelo kumabonakude, uMinenhle “Minnie” Dlamini, obembeswa ngabasemzini kwaJones ngesonto eledlule, eThekwini. Kwenzeke lesi sigameko eqeda ukufika nje emcimbini u-Unathi. Bamhebeze, bamshikizisa okwenkukhu lapho ethi uyathwebula,
baphuthuma kuye. Lo saziwayo (Unathi) utheleke emcimbini ehamba ngonyanyavu lwePorsche emhlophe, edlubhe ingubo ebingenazingalo ebukeka iyimvunulo yesiXhosa. Ngesikhathi
efika umcimbi ubusuqalile, wafike wapaka ngaphesheya komngwaqo wabe esehamba ngezinyawo
eyongena ngesango lakwaDlamini. Esangweni bekunonogada ababili - uthe engena nje umakhalalekhwini ubevele esewuphethe ngesandla wabe esewubhekisa phezulu eshutha kwazise indawo ebekuhleli kuyona izihambeli ibinyukela yena eqhamuka ngezansi.
Ngokushesha, unogada uphuthume kuyena emvimbela ukuba angashuthi. Bakhulume isikhashana kwabe sekusondela unogada wesibili naye obonakale engathi ubevimbela u-Unathi ukuba athwebule izithombe. Usuke lapho wenyukela phezulu lapho bekuhleli khona abanye abantu, wavula isikhwama sakhe
washutheka umakhalekhukhwini wakhe waqhubeka nokubuka umcimbi. ILANGA LangeSonto limthinta u-Unathi lifuna ukuzwa ngalesi sigameko ukhale wakhuza ibhadi, watshela intatheli ukuba iluyeke udaba ngoba aluthi shu. “Bhuti wami ngicela ungalubhali lolu daba. Ayikho into eyisimanga ngalo. UMinenhle usisi wami, ngiyamthanda inkinga bengingazi ukuthi akushuthwa emcimbini kodwa kanginankinga naleyo nto,” kusho yena.
OLUNYE UDABA: Lihoxile icala ebelibhekene nomlingisi
Uqhubeke wacela intatheli ukuba ingamumosheli izinto ngokubhala lolu daba, wathi yena akaxoxi ngempilo yomuntu yangasese. “Ayikho into ebitheni ngabaqaphi ngoba size sazinco-kolela nje nabo,” kuphetha le ntokazi
ekhale ngokuphuthuma, yabe isifisela intatheli usuku oluhle. Ngokuthola kwaleli phephandaba nosomabhizinisi wesifazane odumile, uBasetsana Kumalo, naye uyale-lwe ngonogada ukuba azicishe kumakhalekhukhwini wakhe izithombe abesezithwebulile kulo mcimbi.
Okhulumela inkampani ebibhekelele ezokuphepha kwaMinnie, iXab’s Proctection Unit, uMnu Themba Xaba uthe bona ababekwenza bekuwukulandela imithetho yeklayenti labo ebelibaqashile.
“Ngale kuka-Unathi, noBa-setsana simcishisile izithombe abezishutha ngoba umthetho ubungavumi. Ingci-ndezi yokubhekana nesimo esinjengalesiya sesiyijwayele kakhulu,” kuphetha yena. Kuzokhumbukela ukuthi kuke kwavela phambilini emitho-njeni yabezindaba ukuthi inkampani iMultiChoice eyengamele iMnet ithenge ngoR6 million ilungelo lokuqopha nokusakaza umshado kaMinnie, kanjalo nemicimbi ehambisana namalungiselelo omshado.
Kukholakala ukuthi yikho lokho okwenze ukuba ezokuphepha ziqiniswe kakhulu ukuze kungabi bikho abathatha izithombe bazisabalalise ngaphandle kwabanelungelo lokwenza lokho.